Maamulka Somaliland oo ka walaacsan doorashada dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Maamulka Somaliland oo ka walaacsan doorashada dalka
Wasaaradda Arrimaha dibadda Somaliland ayaa soo saartay warsaxaafadeed ay ku wargelinayso Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo guud ahaan wadamada dunida in Somaliland tahay dowlad madax bannaan oo aan wax howl ah ku laheyn doorashada ka dhaceysa Soomaaliya.
HARGEYSA, Soomaaliya- Maamulka Somaliland ayaa ka hadlay doorashooyinka ka socda Soomaaliya oo ay qeyb ka yihiin, madaama dadka kasoo jeeda gobollada Waqooyi ay helaan qoondada kuraasta ay ku leeyihiin dowladda Soomaaliya.
Wasaaradda ayaa digniin u dirtay xubnaha ku matalaya golayaasha dowladda, iyadoo ku tilmaamtay mid lagu marin habaabinaayo caalamka sida hadalka ay u dhigay.
Warsaxaafadeedkan kasoo baxay Somaliland ayaa imaanaya, xilli toddobaadka soo socda ay Muqdisho ka furmi doonaan kuraasta ay ku leeyihiin Aqalka sare oo ay ku tartami doonaan siyaasiyiin kasoo jeeda gobollada Waqooyi.
Somaliland oo qeyb ka ah Soomaaliya ayaa iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaani sannadkii 1991, markaas oo ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya.
Halkan hoose ka akhriso warsaxaafadeedka, kasoo baxay Somaliland.